Iingcebiso kwi-P3Dv4 ngokuzenzekelayo
umbuzo Iingcebiso kwi-P3Dv4 ngokuzenzekelayo
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #950 by DRCW
Hayi ndikhupha i-2 inqwelo ye-P3Dv4 kwaye ngenxa yesizathu esithile, umfakisi ufuna ukulayisha ifayile kwiprogram x (86) eneendawo ze-32 ezifomathiweyo ezincinane. Iinqwelo ezifunyenweyo xa zizama ukukhetha idizayini nangona ndifumana inkcazo yokufaka ifakwe yimpumelelo. Ndakhangela kwiifolthi zeenqwelo zomoya kwaye akukho nto apho. Ifolda yeenqwelo zezixhobo, iifolda zam moya. Kodwa ndicinga ukuba ndiya kukuxelela, Siyabonga
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #951 by rikoooo
Ngamana ndingabi negama lenye yee-addon ukuze ndikwazi ukuqhuba uvavanyo oluthile ukuvelisa iphutha kwaye ekugqibeleni ndiyilungise.
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #953 by DRCW
Ngokuqinisekileyo ... I-Falcon 50 kunye noDouglas C47, Siyabonga
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #954 by rikoooo
Ndivele ndiqhuba uvavanyo olungakumbi kwaye akukho nto ifunyenwe ngayo, umfakeli uyangena kwifolda ye-64 ifowuni kum.
Ndikho kwi-Windows 10 64 bits. usebenzisa i-P3D v4. Kodwa ndineP3D v1 v2 v3, FSX kunye ne-FSX Steam efakwe kunye ne-X-Plane 9 kwi-11.
I-installer ayikwazi ukwenza iphutha kuba ibheka indlela ye-P3D v4 esuka kwi-Windows registry i-P3D v4 yenze eyona nto ikhiye kunye nendlela.
Ngaba unokujonga kwi HKEY_CURRENT_USER \_ Software \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 \_ AppPath
Ndixelele ukuba yintoni umzila wezinto zombini eziphambili (sebenzisa regedit.exe ukusuka kumyalelo we-Windows ukufikelela kulezo zixhobo zobhaliso)
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #955 by DRCW
Ngokuqinisekileyo, ndisebenzisa iiWindows 7 SP1 ... Oku kungaba ngumcimbi, ndiza kujonga kuyo
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #961 by DRCW
Kulungile, kwakuyinkinga ngeefestile 7 kwaye kwakuyimpazamo yokubhalisa. nangona ukukhuphela kwakunokuzenzekelayo, iifenesi 7 zafuna ukulanda kwiProgram ethembekileyo (x86). Ndiza kuthenga i-SSD drive ukuqhuba iifestile ngokukhawuleza, ndifumene ukuba i-FSX ne-P3D ibhetele kangcono kwi-drive ehlukile. I-Windows iqala ukufumana indlela. Siyabonga ngokuphendula kwakho ngexesha elifanelekileyo! Happyingsings
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #963 by rikoooo
Ok siyabonga ngempendulo yakho